न्यूजिल्याण्डसँगको टेष्टमा ऋषभ पन्तले मौका पाउने सम्भावना – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौंः भारतले न्यूजिल्याण्डसँगको टेष्ट सिरिजको पहिलो खेल शुक्रबार खेल्दै छ । भारतले वानडे र टी–२० सिरिज पनि न्यूजिल्याण्ड टेष्ट श्रृंखला खेल्न लागेको हो । पहिलो टेष्ट म्याच सुरु हुनु अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय टीमका कप्तान विराट कोहलीले प्लेइङ ११ मा पर्नसक्ने खेलाडीको बारेमा जानकारी दिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले चोटमुक्त भइसकेका भए इशान्त शर्माले प्लेइङ ११ मा पर्नसक्ने बताए । इशान्त रणजी ट्रफी खेल्न क्रममा घाइते भएका थिए । यदि इशान्त फिट भएमा भारतीय टीम तीन तिव्र गतिका बलरमा साथ मैदान उत्रने छ । इशान्तसँगै पहिलो टेष्टमा जसप्रीत बुमराह र मोहम्मद शामी तिव्र गतिका बलर हुनेछन् । यी तीनले मौका पाएमा उमेश यादव र नवदीप सैनीले बेन्चमा बस्नुपर्ने छ ।
रोहित शर्मा चोटका कारण न्यूजिल्याण्डसँगको टेष्ट सिरिजमा छैनन् । उनको स्थानमा कसले पाउन सक्लान् मौका? यो विषय निकै रोचक छ । पत्रकार सम्मेलनमा विराटले संकेत दिए अनुसार पहिलो टेष्टमा मयंक अग्रवालसँगै पृथ्वी शाले ओपनिङ गर्ने छन् । पृथ्वीले मौका पाएमा केही दिनअघि न्यूजिल्याण्ड–११ सँग दोहोरो शतक बनाउने शुभमन गिलले डेब्यू गर्ने मौका पाउने छैनन् ।
भारतीय टीमसँग न्यूजिल्याण्ड विरुद्धको टेष्ट सिरिजमा २ विकेटकीपर–ब्याट्सम्यान उपलब्ध छन् । उसँग ऋषभ पन्त र ऋद्धिमान शाह विकेटकीपर छन् । अब यी दुईमध्ये शुक्रबारदेखि हुने टेष्टमा कसले मौका पाउलान्? यस विषयमा कप्तान कोहलीले पन्तले पहिलो टेष्टमा मौका पाउने संकेत देखाएका छन् । ऋषभले न्यूजिल्याण्ड–११ सँगको अभ्यास म्याचमा पनि उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए ।
पहिलो टेष्टमा भारतीय टीमको सम्भावित प्लेइङ ११ः मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पन्त (विकेटकीपर), रवीन्द्र जडेजा, आर अश्विन, मोहम्मद शामी, इशान्त शर्मा र जसप्रीत बुमराह ।